Fotoam-bitan’ny Filoham-pirenena : Hisy ny fotoana tsy hiasana fa hanadiovana -
AccueilRaharaham-pirenenaFotoam-bitan’ny Filoham-pirenena : Hisy ny fotoana tsy hiasana fa hanadiovana
Fotoana ampisehoana firaisan-kina sy fitiavana amin’ny mpiray tanindrazana ny zava-misy amin’izao, fa tsy fotoana hampisavorovoroan-tsaina hoy ny filoham-pirenena nandritra ny fandaharana fotoam-bita izay hiresahina manokana mikasika ny valanaretina pesta. Noho izany, nanamafy hatrany ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina fa “tena misy ny pesta fa tsy foronina, ka aoka hatsahatra ny fanapoizinana ny fiarahamonina amin’ny alalan’ny tsaho sy ny resaka tsy voamarina.Vao mainka hampitombo ny aretina izany , miangavy aho ny hahasoa ny besinimaro no hampiasaina ny teknoljian-tserasera fa tsy hamotika ny fiarahamonina “ hoy hatrany ny Filoha. Mikasika izay tsaho izay, iniana haely izay ihany koa, indrindra mikasika ny famatsiana izay avy amin’ireo mpiara-miombon’antoka ,dia nilaza ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina fa
“ tsy marina ny filaza fa misy ny fanararaotana, na fakana tombony ataon’ny fanjakana , ka ampitomboina na ahena ny tarehimarika. Raha misy ny toe-javatra mampiahiahy ho an’ireo izay manana marary, na amin’ireo tranga izay misy savorovoro, dia miangavy anareo aho hanantona ny manam-pahefana ilazana izany” hoy hatrany ny filoham-pirenena.
Manamafy hatrany anefa ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ankehitriny fa efa misy ny sitrana , satria dia efa misy ny fandraisana andraikitra manoloana ny tranga, toa izany ohatra ireo fanetsehana ny rantsa-mangaika rehetra eny ifotony, toa ireo agent communautaire. Tsy misy tokoa izany teo aloha, saingy misy ireo olona izay manafina ny aretina, ary misy ihany koa hoy ny filoha ny fanampiana ara-moraly izay tokony hatao. Mba hanamorana sy tsy hametrahana ireo olona izay marary anefa , dia efa nisy ny fepetra izay noraisina, ka ireo marary dia tsy voatery miala ao an- tranony fa kosa miantso ny “ambulance”,ary izy ireo no maka ny marary any an-tranony. Toraka izany ny hery vonjitaitra, izay efa hita manerana ireo faritra 22, eo ihany koa ny fanampiana ny fitaovana eny amin’ireo tobim-pitsaboana manokana sy ny hopitaly. Mitohy ny fanaraha-maso, na an-tanety, na an’habakabaka eny amin’ny seranam-piaramanidina izany, sy ny eny amin’ny seranan-tsambo. Nanamafy hatrany moa ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampiana fa mahasitrana ny fanafody, ary efa maro no efa nivoaka ny hopitaly. Na izany aza hoy ny filoha, dia tokony hitandrina ny tsirairay satria pesta aretin-tratra no tena misy eto. Ankilany dia nambaran’ny filoha tao anatin’ny fotoam-bita ihany koa fa efa misy ny fifampidinihana amin’ny OMS mba ahafahan’ny havany hikarakara ny razan’ny havany, mba hanajana ihany koa ny soatoavina.
Hisy ny fanadiovana faobe
Mba ahafahana miady amin’ ny aretina pesta, ary hitsonjovana ihany koa ny fahasalaman’ny besinimaro, dia hisy ny fotoana sy andro izay hanatanterahana ny fanadiovana faobe , izay ho fantatra izany mandritra ny filankevitry ny minisitra. Noho izany dia handray anjara amin’io fanadiovana io avokoa ny tompon’andraikitra rehetra eto amin ‘ny tany sy ny firenena, na aiza izy, na iza hoy ny filoham-pirenena. Satria tokoa hamehana ny fahadiovana izay misy amin’ireo distrika maro, dia fotoana tsy hiasana io fotoana io , fa kosa hiarahan’ny rehetra mientana amin’izay lafin’ny fanadiovana ny tanàna izay. Tsy hohadinoin’ny filoha noho izany ny nanentana ny besinimaro amin’ ny fanajana ny fahadiovana, na ihany koa ny fiaraha-mientan’ny rehetra amin’ny ady izay tanterahina amin’ny valanaretina pesta.
Malalaka ny Mpitsara eo am-panatanterahana ny asany. Tsy misy olon-kafa hafa afaka maka ny toerany mihitsy. Ny mpitsara ihany no mamoaka ny didim-pitsarana fa tsy ny mpivaro-kena na koa mpivaro-damba. “Ambarako ampahibemaso eo anatrehan’ny vahoaka ...Tohiny